That's so good, right?: Crazy Night Out
ဒီည စနေနေ့ည။ အခုချိန်တော့ကျွန်တော့်အတွက် အကောင်းဆုံး။ အပြင်ထွက်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ 'ဇေဇေ'နှင့် သောက်ဖြစ်နေခဲ့တာ 'Black Rose' မှာ။ အသက် ၂၅ပဲရှိသေးတဲ့ကျွန်တော့်အတွက် ပျော်ရွှင်ချင်သေးတာ အမှားမဟုတ်ဘူးထင်တာပဲ။ ပြီးတော့ 'ဝေဖြိုး' ကိုမေ့ပစ် လိုက်ဖို့။
ကျွန်တော်ကတယ် ကတယ် ကပွဲကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ။ Heineken နှစ်ဘူးလောက် ကစ်ပြီးတော့။ ဒါတောင် အရှိန်ရနေပြီ။ ကနေတုန်း ဇေဇေ က vodka တစ်ခွက်ယူလာသေးတာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်သိပ်မသောက်ဖြစ်ပါဘူး။ Heineken တောင်နှစ်ဘူးထက်ပိုပြီး မသောက်နိုင်တာ။
ရင်ထဲနည်းနည်း ပျို့ပြီးအန်ချင်တာနဲ့ အပြင်ထွက်ခဲ့ပြီး လေကောင်းကောင်းရတဲ့ လှေကားထစ်တွေ ထိပ်မှာထိုင်နေဖြစ်တယ်။ Stone -washed လုပ်ထားတဲ့ဂျင်းရယ် ညစ်ပေပေ ရှုးဖိနပ်တစ်စုံနှင့် ကျွန်တော် ကြယ်တွေမြင်နေရတဲ့ နေရာနားမှာ အန်လေသတည်းပေါ့။ လည်ချောင်းထဲ ပိုက်ထိုးထည့်လိုက်သလို အန်နေခြင်းက ကြည့်ကောင်းအောင်ဆွဲဆောင်မှုတော့ မရှိစကောင်းပါဘူးနော်။
Vodka သောက်လိုက်တော့လည်း ဗိုက်ထဲစားသမျှရှင်းသွားတာပေါ့။ သူများတွေတော့မသိဘူး။ လေတဖြူးဖြူးနဲ့ ထိုင်နေရတာကို သဘောကျနေ မိတယ် အေးစက်စက်ညမှာ တစ်ယောက်တည်း။ လေအေးတွေက ကျွန်တော့်ကို ကလူကျီစယ်နေကြရဲ့။ အတော်ကြာ တော့မှ ဘေးဘီကို ကြည့်လိုက်တာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်မှန်းသိရတယ်။ အနက်နဲ့လိမ္မော်ရောင်တစ်ချို့ပါတဲ့ တစ်ထည် ၀တ်ထားတဲ့ ငနဲ တစ်ပွေ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတာဗျ။ အကြည့်ခပ်ပြင်းပြင်းတွေထဲမှာ အရိပ်အယောင်တစ်ခုခုပါနေသလိုပါပဲ။ ပြင်းထန် သော၊ ပြီးတော့ အန္တရာယ်၊ပြီးတော့ Sexy.
ကျွန်တော် မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တယ်။ အချင်းချင်း မိတ်ဆက်တာမြန်မြန်ဆန်ဆန် ၀တ်ကျေတန်းကျေပေါ့။ သူ့နာမည်က 'ဇော်ကြီး'တဲ့။
ကျွန်တော်က မူးနေပေမဲ့ ဒီလောက်တော့ပါးပါသေးတယ်။ 'ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းလုပ်ချင်တာရတယ'် လို့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့လေ။
'ငါ့မှာ bf ရှိတယ်ကွ'
'Daniel' ဆိုတဲ့ သူ့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ သူလည်း သူရည်းစားလို ရူပါမလာပါဘူး။ မျက်စိအကြည့်လွှတ်လိုက်တာ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ ၀က်ခြံကလည်းရှိသေး ၀လည်းဝပုံ ခန္ဓာကိုယ်က။ သူက လုံးလုံးကြီးရုပ်ဆိုးတာတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ အသက်အရွယ်က ကျွန်တော့် အသက်လောက်ပါပဲ။
သူတို့စုံတွဲက သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်း ကျော်စွာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ သူကတော့ တော်တော်ချောတာဗျ။ အသက်ကတော့ ၃၀၀န်း ကျင်လောက်ရှိပြီ။ သူရယ်ပြုံးပြလိုက်တိုင်း ပေါ်လာတတ်တဲ့ သွားတွေဟာ ဖြူဖွေးနေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အပြုံးက နွေးထွေးမှုမပါ အေးစက် စက်။ သူ့စိတ်ခံစားချက်ကို မပေါ်အောင်ဖုံးထားတာတော့ ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။
ဇော်ကြီးက ကိုကျော်စွာကို တစ်ခုခုသောက်ဖို့ဆိုပြီး ကလပ်ထဲပြန်ဝင်သွားတော့ 'Daniel' ကပြောပြတယ်။ သူနဲ့'ဇော်ကြီး'တို့ အတူမနေခင်က ၃နှစ်ကြာအတူတူနေထိုင်မှုအကြောင်း၊ 'ဇော်ကြီး'နဲ့ ကိုကျော်စွာတို့ အတူနေခဲ့ကြတာ ၄နှစ်တဲ့။
ကိုကျော်စွာနဲ့ ဇော်ကြီးတို့သောက်စရာအချို့ယူလာကြပြီး ပြန်လာတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Coke ဘူးကိုပဲလှမ်းယူလိုက်တယ်။
ကိုကျော်စွာလည်း သူတို့လိုပဲ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်ဟန်တူတယ်ဆိုတာကို ဇော်ကြီးက အရိပ်အမြွက်ပြသေး။ ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူး ဘယ်သူဖြစ်နေနေ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ အိပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ပျော်နေလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝေဖြိုးကို မေ့နိုင် ဖို့ အကူအညီသဘောမျိုးဖြစ်ရင် ပြီးတာပါပဲ။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်တည်း ဖီးလ်ဖြစ်နေတာထက်စာရင် နှစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာကပို ကောင်းပါတယ်လေ။ မှန်တယ် ဟုတ်? လောလောဆယ် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ horny ဖြစ်မနေခဲ့ပါဘူး ကမယ်မူးမယ် လျှောက်သွားမယ် ဆိုတာမျိုးပဲ စိတ်ထဲရှိနေခဲ့တာ။
အခုတော့ ဇော်ကြီးက ကျွန်တော့် Jeans ဘောင်းဘီကဇစ်ကိုအသာဆွဲဖွင့်ကာ သူ့ရဲ့ပူနွေးနေတဲ့လက်ဖြင့် ကျွန်တော့် Rocket ကြီးကို မာသထက်မာအောင် ပွတ်သပ်တယ် ဖြည်းဖြည်းနှင့် အသာအယာပေါ့။ က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါ်မှီတွယ်နေပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းများ ဖြင့် ဇော်ကြီးကိုအရင်နမ်းကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းများကိုတော့ မွတ်သိပ်စွာနမ်းပါတော့တယ်။ သူ့လျှာအရှည်ကြီးကလည်း ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲအနှံ့။ အိုး....သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကနေ စီးကရက်အနံ့အပြင် တစ်ခြားကျွန်တော်မိသတဲ့ အနံ့တစ်မျိုးရနေသလိုပဲဗျ။ ကျွန်တော်. ...ကျွန်တော် ဖြစ်လာပြီ။
ဘာမှဝင်မနွှဲဘဲကြည့်နေတဲ့ ကိုကျော်စွာက 'Daniel ကို ငါတို့သွားကကြရအောင်လား? လိုက်မယ်မဟုတ်လား Daniel?' လို့ပြောကာ ကပွဲခန်းမကြီးထဲဝင်သွားကြပါတယ်။ ဇော်ကြီးနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အနမ်းမပျက်ကျန်ခဲ့တာပေါ့။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့ နမ်းတာကိုရပ်လိုက်ကာ ဇော်ကြီးက Daniel နဲ့ ကိုကျော်စွာကိုသွားရှာရမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို ဒီနေရာမှာပဲ စောင့်ခိုင်းတယ်။
ဇော်ကြီးသွားတာ အတော်ကြာပြီ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဇေဇေကို ကပွဲကြမ်းပြင်ဘက်ကိုသွားကြည့်ဦးမှပါ။ သူကနေတုန်းလား? အိမ်ပြန်ဖို့သူ့ကားကြုံစီးရမှာလေ။ ကလို့အရှိန်ကောင်းတုန်း...ပြီးတော့ သူက အတူကဖို့လက်ဝှေ့ယမ်းပြီးခေါ်သေး။
ကျွန်တော်စောင့်နေရတာကို မုန်းတယ်။ အဲဒါကြောင့်ထရပ်ပြီး club ကိုပတ်လိုက်တာ ရေကူးကန်နားက စားပွဲမှာ Daniel နဲ့ ကိုကျော်စွာကိုတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခပ်မှောင်မှောင်ထောင့်လေးမှာ သွားထိုင်ဖြစ်ကြတာပေါ့နောက်တော့။ ဇော်ကြီးက သောက်စရာ တစ်ခုခုနဲ့လှမ်းလာတယ်။ သူပြောတာက ဒီထဲမှာ Liquid E ပါသတဲ့။ အဲဒီ့ဟာက ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို ရီဝေေ၀ ဖြစ်စေပါရော။
Daniel က ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကိုပွတ်သပ်ပြီး သဘောကျတက်မက်နေတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့သူ့လက်တွေက အကြမ်းပတမ်းနှင့် ဖြစ်ကတတ်ဆန်း Shit! I really don't feel good.
ဒါနဲ့ကျွန်တော် ရေကူးကန်နားက အနီရောင် ခုံတန်းလျားပေါ်လှဲလျောင်းနေလိုက်တယ် ရယ်မောသံတွေကိုနားဆင်ဖို့၊ မြူးကြွနေတဲ့ ဂီတသံ၊ပြီးတော့ ရေကူးကန်နားက စားပွဲပေါ်ကကြားနေရတဲ့ အသံအချို့ကို နားဆင်ဖို့။ ဟူး.....လေကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှူ၊ ခပ်ပြင်းပြင်း ထုတ်...ဒါပဲကောင်းတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ 'ဇေဇေ'နဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီကောင်က စော်တစ်ပွေနဲ့ Join ပြီးနေခဲ့တာ။ မပြန် သေးခင်လေးမှာ ဘားက ခပ်ဟော့ဟော့ကောင်လေးနှစ်ယောက် ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ကိုကျော်စွာက အမိအရဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ သေးတယ်။ တော်တော်ရွံဖို့ကောင်းတာပဲ။ သူ့ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်မိပြီ။ အေးဆက်နေတဲ့ ကားParkingမှာ ကျွန်တော်တို့ မနက် စောစော မထွက်ခွာခင် ၀င်ပေါက်ကနေ ခပ်ပိန်ပိန် Lady boy လေးတစ်ယောက်ဝင်လာတာကို ကိုကျော်စွာက 'ဒီကိုလာဦးလေးကွာ အချစ် လေး....၊ မင်းကို အင်္ဂလန်ကောင်းကောင်းပို့ချင်လို့ပါ'တဲ့ အော်ပြီးပါးစပ်သရမ်းလိုက်သေး။
ငွေရောင် Mercedes ကားကြီးစီးပြီးပြန်ခဲ့ကြတာလေ။ အတော်ကောင်းတာပဲ ကူရှင်တွေ၊ ကားတွင်း Audio၊ လေအေးစက်တွေက ရှယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဘာခံစားချက်တွေလဲမသိ တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။
ကားထဲမှာ ကိုကျော်စွာက ကျွန်တော့်ကိုပြောနေသေး ကလိနေသေးတာဗျာ။ 'မင်းဟာ ဘယ်လောက်ကြီးလည်းကွ? ငါတို့ကို မင်း -ီးကြီးကိုပြလေကွာ ကြည့်ရအောင်' ပြောပြီးတော့လည်း ရယ်စရာဟာသတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြီးသည့်အလား ရယ်နေသေးတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကျောက်သားနံရံတွေ ကာရံထားတဲ့ အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ကို ရောက်လာကြတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်က ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင် မျိုးနဲ့ တော်တော်ကြီးတဲ့အိမ်။ ခြံဝကနေ အိမ်တွင်းအရောက်မောင်းလာတာ ပန်းတွေက တစ်ခြံလုံးမွှေးနေရော။
ကောင်းကင်ပြင်ကျယ်ကြီးတစ်ခုလုံးလည်း အပြာရောင်သမ်းစပြုလာသလို ငှက်တွေလည်း မနက်ခင်းတေးသီကြပြီ။ အတော်နားမခံသာတဲ့ နားညည်းတဲ့ ငှက်သံတွေ Shit!
ကိုကျော်စွာ ဖုန်းပြောနေသံကြောင့် ကျွန်တော်နိုးလာတာဖြစ်မယ်။ 'Black Rose' မှာဆုံခဲ့တဲ့ ချာတိတ်နှစ်ပွေဆီ ဆက်နေတာလေ။ အသံကိုက ကြားရတာတစ်မျိုးပါ။
'မင်းဒီနံပါတ်ကိုပဲ ပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ်ကွာ၊ ဒါက dual – SIM ပဲ'
'A dual SIM' တဲ့အဲဒါဘာပါလိမ့်? ကျွန်တော်တော့မသိဘူး။ အပေါ်ထပ်ကို တက်ဖို့လှေကားထစ်တွေက နှစ်ဖက်ခွဲပြီး အပေါ်ထပ် ၀ရံတာကို ဆက်ထားတာဗျ။ ကျွန်တော် ဘယ်ဘက်လှေကားထစ်က တက်သင့်လား? ညာဘက်ကလား? တစ်နည်းအားဖြင့် ဒီလို ဆုံးဖြတ်မှုအသေးစားလေးတွေကလည်း အရေးပါသလိုပါ။ ကျွန်တော်ညာဘက်လှေကားထစ်တွေပေါ်ကျော်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ကြီးကအတွင်းမှာ အတော်ကျယ်ပြန့်တာပါ။ အပြင်ကကြည့်ရင် နှစ်ထပ်အမြင့်ကြီးလို့ထင်ရပေမယ့် အတွင်းမှာတော့ သုံးလေးထပ် လောက် အထပ်ပုံစံတွေခွဲထားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲက ထွက်လာသလိုပါပဲ။ Marble ကျောက်သားတွေ၊ သစ်ချောပါကေးကြမ်းပြင်တွေ၊ ပြီးတော့ ပြောင်ချောနေတဲ့ ကျွန်းလှေကားကြီးနှစ်သွယ်က ၀င်ပေါက်ကနေ မလှမ်းမကမ်းမှာ ထုထည်ကြီးစွာခံ့ထည်လှပါရဲ့။
အနားယူအပန်းဖြေရာ အခန်းကြီးကလည်း မိုက်ပါတယ်။ ရှည်လျားကျယ်ဝန်းပြီး အခန်းရဲ့အဆုံးသတ်ကိုတော့ မနက်ခင်းနေရောင်နဲ့ အတူ အစိမ်းရောင်တောအုပ်နှင့် တောင်ခါးပန်းစောင်းစိုက်ခင်းတွေကို မြင်ရနိုင်တဲ့ မှန်ချပ်အကြည်ကြီးတွေနဲ့ ကာရံထားတာ။
တနင်္ဂနွေမနက်ခင်းမှာ ဒီလိုနေရာကိုရောက်နေခဲ့ရတာ အတော်ကြည်နူးမိပါတယ်လေ။ စပီကာမှ Akon ပြီးတော့ Britney တို့ရဲ့တေးသံ တွေကို နားဆင်နေရပြီး အသံမဲ့ အပြာကားကိုတော့ ခပ်ကြီးကြီး တီဗီ စခရင်မ်အပြားပေါ်ကနေ ကြည့်နေရတာ စစ်ပွဲထဲက စစ်သားတွေရဲ့ နှာမှုတ်သံတွေကြားရသယောင်။
ဇော်ကြီး ကမ်းပေးတဲ့ စီးကရက်ကို တစ်ဖွာနှစ်ဖွာ ဘာရယ်မဟုတ် ရှိုက်မိကြည့်မိတာ ကျွန်တော့နှာခေါင်းတွေ ပြီးတော့ လည်ချောင်းတွေ ထဲ တစ်မျိုးကြီးပဲ ခံစားရတာ။
Screen ပေါ်မှာ လူဖြူကောင်လေးချောချောနှစ်ယောက် မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကူလူ၏သို့မြူ၏သို့လုပ်နေကြတာ သူတို့ငပဲတွေက ထွားလိုက် တာ။ plasma screen ကြောင့်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ဒါမှမဟုတ် drugs ရဲ့ effect ကြောင့်ခံစားရတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကြည့်ရတာတော့ သူတို့ cock size တွေကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပဲ အတော်တုတ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကြည့်ရင်းနဲ့ ပေါင်ကြားက ညီဘွားက ခေါင်း ထောင်ထလာပါရော။ ဇော်ကြီးကိုမေးလိုက်မိသေးတယ် ဒီလောက်ထွားတဲ့ ငပဲတွေနဲ့ ခံတဲ့ကောင်က ဘယ်လိုများ ခံပါလိမ့်လို့။ သူက ဆေးသုံးကြတာတဲ့ဖြေတယ်။ ဒါဆို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုပေါ့။
Daniel ကိုသေချာကြည့်မိတော့ သူလည်းထို့အတူပါ။ သူဘာသုံးလည်းမသိပေမဲ့ အဲဒီ့ဟာက သူ့ကို hyperactive ဖြစ်နေစေတာတော့ အမှန်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ကျွန်တော်အရမ်းကို relax ဖြစ်ပြီး သီးသီးသန့်သန့် ခံစားချက်မျိုးရနေခဲ့တာ။ အရက်မသောက်ချင်ဘူး ဒါပေမဲ့ အရက်ကို ရှောင်သူတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူးလေ။ ဇော်ကြီးစားပွဲပေါ်က စီးကရက်တစ်လိပ်လောက်များ ယူပြီးရှိုက်လိုက်ရရင် ကောင်းမလား? အဲဒါတွေက ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တော့ မဖြစ်စေလောက်ပါဘူးနော်။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ L-shaped ပုံဆိုဖာပေါ်က ခေါင်းအုံးလေးတွေမှာ မှီတွယ်လှဲလျောင်းရင်း တီဗီက porn ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကာ -ီးကိုအပြင်ထုတ် လက်ကစားသည်ပေါ့ ကျွန်တော်လေ။ ဘာရှက်စရာလိုတော့လည်း။
ဘေးကိုကြည့်မိတော့ ကိုကျော်စွာက တီဗီနားက ဘီရိုပုလေးပေါ် လက်ထောက်မှီရင်း ကတော့ အခြားတစ်ဘက်က ဆိုဖာပေါ်မှာ ခြေပစ် လက်ပစ်လှဲလျောင်းနေတာကိုမြင်ရနိုင်ပါရဲ့။ ဇော်ကြီး.....ဇော်ကြီးက ကျွန်တော့်ပေါင်နှစ်ချောင်းကြား ၀မ်းလျားမှောက်ကာ သူ့လက်တွေ ဖြင့် ကျွန်တော့်ဒစ်ကို အသေအချာ play နေတော့တယ်။
'ကျော်စွာ...ကားပေါ်မှာ မင်းမေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ ငါသိပြီကွ...ဟီး...၇လက်မနီးပါးရှိတယ်'
ဇော်ကြီးက ကိုကျော်စွာပြောတာကို ကြားရတော့ သဘောတကျ ရယ်မောကာ 'ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူ bottom တစ်ယောက်ပဲ၊ လုံးဝဂွတ်တယ်အနေအထားက'
သူဘယ်လိုများသိသွားခဲ့ပါလိမ့်? ကျွန်တော် အဲဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်သူဆိုတာ။
ခဏကြာတော့ ဇော်ကြီးက မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ သူ့အနက်ရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီက ဇစ်ကိုဆွဲဖြုတ်လျှက် 'ကိုယ့်ငပဲကို အာဘွားပေးပေး ကွာ' ဆိုတော့ ကျွန်တော် မငြင်းနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ရှေ့နားကိုသွားကာ ထိုင်ချလိုက်ပြီး ငပဲကိုအသာကိုင်လိုက်မိပါတယ်။ နောက် ဒစ်ကို ကိုင်တာ ခဏရပ် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲ ညှပ်ကာ စုပ်ယူလိုက်တာ။ သူ့ဒစ်က အတော်တုတ်တာပဲ။ တော်တော့်ကိုတုတ်တာ။ ထိပ် အရေပြားကိုဖြတ်ထားတယ်။ အနံ့အသက်ကင်းကင်း ချောမွေ့တဲ့အရေပြားနဲ့ စုပ်ရတာ so delicious.
ကွမ်းသီးခေါင်းကတော့ သိပ်မကြီးပါဘူး သံခမောက်လို ပုံသဏ္ဌာန်လေး။ အလယ်မှနည်းနည်းတုတ်ပြီး အရင်းကတော့ အတော့်ကို တုတ်ခိုင်နေရော။ ထိပ်ပိုင်းလေးကို အသာမျှင်းပြီးစုပ်နေရာကနေ တစ်ချောင်းလုံးသွင်းဖို့ကြိုးစားကြည့်တာ မရပါဘူး ပျို့အန်မတတ်ဖြစ် ရတယ်။ ဇော်ကြီးက မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းပြီး သူကတော့ ဆိုဖာပေါ်ကို ခြေပစ်လက်ပစ်လှဲလိုက်ကာ ငပဲကိုဆက်စုပ်အချက်ပြပါရဲ့။ ကျွန်တော့် ခေါင်းကို လက်နဲ့အသာထိန်းကိုင်ရင်း ခါးကိုကြွကာရှန်တိန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ အသွင်းအထုတ်မှာ ဒါရိုက်ဝင်မသွားအောင် နှုတ် ခမ်းသားတွေနှင့် ညှပ်ဖမ်းလိုက်၊ လျှာနဲ့ရစ်ဝိုက်ကာ ထိန်းလိုက် စသဖြင့် သူ့ကိုပြုစုတာ မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီး ဖီးလ်ယူပါတော့တယ်။
ကိုကျော်စွာက ' ကြည့်ရတာကောင်းတယ် ဖီးလ်လာတယ် ဆက်စုပ်ကွာ၊ အဲဒါကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်' ဆိုပဲ
အခု ဇော်ကြီးကို ဒူးထောက်ခစားကာ ဖီလင်ကောင်းကောင်းပေးနေပါတယ် ကျွန်တော်.....လျှာတွေ အာတွေသုံးပြီး။ Daniel ကကြည့် ရုံပဲကြည့်နေကာ တိတ်ဆိတ်လို့။
ဇော်ကြီး ဒစ်ကို ကျွန်တော်အတန်ကြာမျိုနေတာ ဟိုချာတိတ်နှစ်ယောက်ရောက်လာပြီဆိုမှ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ အသာစွပ်ကြကာ နှစ်ယောက်သား ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ druggy party ကို join ဖို့လာဟန်တူရဲ့။
ကိုကျော်စွာကိုပြောမိသေးတယ် 'အစ်ကို့ဘော်ဒါတွေက ဘယ်လိုပါတီမျိုးကျင်းပမယ်ဆိုတာ သိလားဟင်?' ပေါ့။
'သူတို့က ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ မဟုတ်ပါဘူးကွာ ၊ fuck လုပ်ဖို့သက်သက်တွေ'
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းသေးသေးလေးတစ်ခုကို ပြောနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော် သူ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကြည့်ပြီး အန္တရာယ် မကင်းဘူးလို့တွေးမိနေပါပြီ။ နှစ်ဦးသားကြား ဆက်ဆံရေးက နွေးထွေးလာမှုမရှိ။
ချာတိတ်နှစ်ပွေက အေးအေးသက်သာပဲ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နာမည်တွေကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး သူတို့ဝတ်ဆင်လာတဲ့ ဒီဇိုင်းက Retro Fashion တွေ၊ အသားအရေကြည်လင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခြောက်သွေ့ပင်ပန်းနေပုံပေါ်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့။ အဲဒါကို ပိုပြီး မှတ်မိနေရတယ်။
တစ်ယောက် - ကျွန်တော် 'ကျော်ကျော်'လို့ခေါ်မိတဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်း ရင်ဘတ်မှာ အမွှေးနုလေး တွေ၊ ဆံပင်က ခွေခွေလိပ်လိပ်လေးတွေဖြင့် သူတို့နှစ်ယောက်ထဲမှာ ကြည့်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သူ့ရဲ့ bf ဒါမှမဟုတ် ဘာဖြစ်ဖြစ် ကောင်လေး 'နေဇော်'ကတော့ ဆေးသမားရုပ် ပိန်ညှောင်ညှောင်နဲ့။ ဆံပင်ကို အရောင်ချွတ်ထားပြီး gel တွေနဲ့ ထောင်ထားတယ်။ မျက်လုံးတွေက ရီဝေေ၀နဲ့ အရည်လဲ့နေတာ ကြည့်လို့တော့လှသား။
သူတို့ crystal အချို့နဲ့ Liquid G ပါလာကြတယ်။ Daniel ကနည်းနည်းလောက် မျောချင်သေးတာ။ ဇော်ကြီးက သတိပေးရတယ် သူ့ကို။ 'Liquid G နည်းနည်းလေးမှ မသောက်ရဘူးနော် ငါ့ကောင် မင်းတခြားဟာတွေ ကစ်လာတာ တော်တော်များတယ်'
ဇော်ကြီးအပြင်ခဏထွက်သွားချိန်မှာတော့ Daniel က လှစ်ကနဲဆို ဖန်ခွက်ပုလေးထဲ နည်းနည်းထည့်ပြီး မျိုလိုက်သေးတာ။ ကျွန်တော် တို့တွေ ရှိနေတဲ့ဆိုဖာတွေပေါ်လှဲလျောင်းကြပြီး porn ကိုဆက်ကြည့်ကြတယ်။ ခပ်ချောချော ဘဲလေးတစ်ပွေရဲ့ ခရေတွင်းထဲ နောက် တစ်ယောက်က ဖြည့်နေတယ် full of cum ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကြည့်ရင်းမျောပေါ့။
Daniel အဲဒါကိုသောက်တာ ဇော်ကြီး မသိလိုက်တာမျိုးကို ကျွန်တော်သတိမထားမိပေမဲ့။ ကိုကျော်စွာနဲ့ သူ့ဘော်ဒါတွေ ရေချိုးခန်း ဘက်ထွက်သွားကြတာကိုတော့ ကျွန်တော် သိလိုက်တယ်။
Daniel ကစပြီးတောင်းပန်နေပါပြီ ဇော်ကြီးကိုလေ။ ဘာတွေမှန်းမသိဘူး ချွဲ့နွဲ့တောင်းပန်နေတာက အကြာကြီးပဲ သူ့ဟာနဲ့သူ ဟုတ်နေ တော့တာ။ ဇော်ကြီးက သူ့စိတ်သူလျှော့လိုက်ပြီး သောက်စရာတစ်ခုခုယူဖို့ မီနီဘားထားတဲ့အခန်းတစ်ဘက်ခြမ်းကို သွားကာ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သယောင် အေးအေးဆေးဆေး။ ခဏနေတော့ ရေချိုးခန်းဘက်သွားတဲ့ သုံးယောက်သား တဘက်အဖြူကြီးတွေ ခါးမှာပတ်လို့ အခန်းထဲဝင်လာကြပါတယ်။ ကိုကျော်စွာက အတော်မိုက်တဲ့ဘော်ဒီပိုင်ရှင်ပါ။ သူ့ရင်အုပ်တွေကနေ အောက်ထိ ထင်းကနဲပေါ်နေတဲ့ ဗိုက်ကြွက်သားတွေက အမြှောင်းလိုက်ပါပဲ။ အရေပြားတွေဟာ စိုလက်လို့ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုပြောင်ချောနေတော့ ဖီးလ်မလာပါဘူး။
ဇော်ကြီးကို တစ်ခြားအနားယူတဲ့အခန်းပိုထဲက DVD စက်ကို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးဖို့ပြောဆိုရင်း ကိုကျော်စွာခေါ်သွားတဲ့ခဏ ကျွန်တော့်မှာတော့ စကားချွဲပြစ်ပြစ်တွေပြောတတ်တဲ့ Daniel နဲ့ကျန်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ အချိန်ကောင်းလေးတွေ မပိုင်ဆိုင်ရတော့မှန်း စတင်ခံစားရပြုလာပါပြီ။ ကျွန်တော်ဘာပြောလည်း သဘောပေါက် မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ အဓိကအကြောင်းရင်းက ဒီမှာ အတူနေနေတဲ့အချိန်အတွင်း ကျွန်တော့်ကို ဇော်ကြီး -ိုးတာခံချင်နေခဲ့တာ။ အခုသူ့ကို ဘယ်နေရာမှာ ရှာရမှန်းမသိ။
'အပေါ်ထပ်ကိုသွားရအောင်' တဲ့ Daniel ကပြောတဲ့အခါမှ သူ့နောက်က ထလိုက်ဖြစ်တယ်။ 'ဒီလှေကားထစ်တွေကို သတိထားကွ၊ ငါတို့အိမ်ဖော်ကောင်မလေးတောင်ချော်လဲပြီး ခြေထောက်ကျိုးသွားတယ်' ကျွန်တော်တို့ ခြေအိတ်တွေ မချွတ်ထားပေမဲ့ သူက သတိပေးပါသေးတယ်။
အပေါ်ဆုံးထပ်က အတော်ကျယ်ပြန့်တဲ့ ခန်းမကျယ်ကြီးရှိသလို တိုက်ဘေးကနေ လှေကားကြီ:တွေနှင့် တက်နိုင်အောင်လုပ်ထားသေး တာ။ အိမ်မကြီးဘေးမှာရှိတဲ့ ရေကူးကန်ကြီးကနေ တန်းတက်လို့ရတာပေါ့လေ။ နေ့ခင်းသာမယဟာကြည်လင်ချိုသာပြီး နွေးထွေးနေ တာပါပဲ။ အပြင်ဘက်က ရှုခင်းကို ငေးကြည့်မိရင်း ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီ 'ဝေဖြိုး'နဲ့ အတူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်များကိုတွေးမိရပြန်တယ်။ ဒီလောက် ရူးရတော်ရောပေါ့လို့ ဆိုချင်ပေမယ့် ခံစားချက်တွေက မအိုဟောင်းသေးပြန်ပါဘူး။
အိပ်ခန်းကြီးက အတော်ကိုကြီးတာပါ။ တံခါးမကြီးကို ဟကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာကျက်က ဖန်မီးဆိုင်းက တွဲလွဲကျနေသလို၊ နံရံကပ်က လည်း မီးလင်းဖိုနဲ့။ အခန်းထဲ နွေးပြီး နေ့အလင်းရောင်ကို မမြင်ရပါဘူး။ အိပ်ယာအကြီးကြီးကလည်း မသပ်မရပ် အိပ်ယာခင်းတွေ ဘေး ကိုကျလို့။ အ၀တ်အစားတွေကလည်း ကြမ်းပြင်မှာ မသပ်မရပ်။ ခုတင်ခြေရင်းမှာ တီဗီအကြီးကြီးနဲ့အတူ Falcon DVDs တွေဟာ တီဗီ စင်ရဲ့ယာဘက်ထောင့်မှာအပြည့်။ ပြောတာက ဇော်ကြီးက TV နှင့် Satellite ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းတဲ့ ဒီကိုကျော်စွာ့အခန်းမှာ
တံခါးမကြီးကို ဖွင့်ဝင်လိုက်တော့ ကိုကျော်စွာ့ဘော်ဒါနှစ်ပွေက ခုတင်ပေါ်မှာ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း အ၀တ်မကပ်၊ ခပ်ပိန်ပိန်ကောင်လေး နေဇော်က လေးဘက်ထောက်ပြီး တင်ပါးတွေကို မြှောက်ကာ ကုန်းနေတယ်။ ကိုကျော်စွာက အနက်ရောင် dildo တစ်ခုဖြင့် နေဇော့်ခရေ တွင်းထဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်နေသလို ကျော်ကျော်ကတော့ သူ့-ီးကြီးကို နေဇော့်ပါးစပ်တွင်းသို့ ခါးကို ကော့ကာကော့ကာ သွင်းနေ တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဟာက မာထောင်မနေဘဲ မမာ့တမာဖြစ်နေရဲ့။ ကျော်ကျော်က 'cock ring တစ်ခုလောက် တနေရာရာမှာ မ၇ှိဘူး လား?' မေးနေ သေး။ အား....ဘာတွေမှန်းမသိဘူး ကျွန်တော် ညောင်းလာပြီ...ပင်ပန်းလာပြီ။ ဒါကြောင့် အိပ်ယာတစ်ဘက်ခြမ်းမှာ လှဲလိုက်ကာ မျက်နှာကျက်က မီးဆိုင်းတွေကိုသာပဲ ဆိုက်ကြည့်နေမိတော့တယ်။
ဇော်ကြီး အခန်းထဲဝင်လာပြီးနောက် ခုတင်စွန်းမှာ သူဝင်ထိုင်တယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ ပူနေသလိုပဲ ချွေးတွေရွှဲနေသလို နွမ်းနယ်နေသလို ပါပဲ။ ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတာတွေ မဖြစ်လာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ပါပြီ။ ဇော်ကြီးက သူဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး စိတ်ရှုပ်နေသလိုပဲ တဲ့လေ။
'အဲဒါပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကြိမ်မှာလုပ်နိုင်တာပဲလေ..'
သူနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဖို့ဆိုတာဖြစ်မှ မဖြစ်နိုင်ဘဲ။ ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်နှင့် ဇော်ကြီးတို့ အောက်ဆုံးထပ်ကို ဆင်း လာတော့ Daniel ပါလိုက်လာခဲ့ပါရဲ့။ အောက်ဆုံးတံခါးဝနားမှာ ကျွန်တော်ရပ်စောင့်နေတော့ သူတို့နှစ်ယောက်လှေကားထိပ်မှာရပ်ရင်း တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ ဘာပြောနေကြလည်းမသိ သူတို့ဘာပြောနေမှန်း ကျွန်တော်မကြားရပါဘူး။
ကျွန်တော်ဇော်ကြီး ကားမောင်းပြီးပို့မှာကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်။ Taxi တစ်စီးငှားပြီးပြန်ဖို့သင့်တော်ကြောင်း ပြောတော့ 'သူက အိုကေပါတယ် လိုက်ပို့မယ်'တဲ့။ Daniel ကလည်း 'မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ၊ ကားတစ်စီးလုံး လေအိတ်တွေပါတယ်' ၀င်ပြောတော့ ဒါဆိုလည်း မဆိုးဘူးဆိုပြီး ငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။
Merc ထဲမှာတော့ အဲကွန်းကြောင့် အေးမြလို့ နေရတာကောင်းပေမဲ့ အပြင်မှာတော့ မနက်၈နာရီနှင့် မတူ ပူလွန်းလှပေစွ နေရောင် တွေက။
ဇော်ကြီးက စကားများများပြောတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ ဒါကို ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။ သူ့စကားလုံးတွေထက် သူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၊ သူ့အပြုအမူ၊ ဂရုစိုက်မှုတွေက ကျွန်တော့်ကို တွေ့စကတည်းက နှစ်ခြိုက်စေပါတယ် သူ့ကို။
ကျွန်တော့်ကို ကားရပ်မပေးခင်လေးမှာ ကျွန်တော့် Hand phone နံပါတ်ကို မေးပြီးမှတ်သွားပါတယ်။ သူခေါ်မခေါ်ဆိုတာတော့ သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ပေါ့ လေ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ သူနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တွေ့ ပတ်သက်ချင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူသိပါ့မလဲ?
ကျွန်တော်နေတဲ့ House complex ရဲ့ gate မှာသူချပေးခဲ့ပါတယ်။ အတူနေ ဘော်ဒါနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်ကို လမ်းလျှောက် ပြန်ခဲ့ပါရဲ့။ ဇေဇေ့ကို နှိုးပြီး ကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်လာချိန်အထိ ကျွန်တော်အိပ်ချင်စိတ်မဖြစ်သေးပါဘူး။
သူတို့ တိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့ အရက်တစ်ခွက်၊ စီးကရက်တစ်လိပ်ရဲ့ effect က ရှိနေတုန်းထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အိပ်လို့မရဘူး။ အိပ်လို့မရ တဲ့နည်းတူ အိမ်ကိုရှင်းလင်းဖို့ စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ ဟိုနှစ်ယောက် မထသေးဘူး ကာလနဂါးရဲ့ ညီတွေ။
မီးဖိုချောင်ထဲသွား ပန်းကန်တွေဆေး၊ ကော်ဖီနှပ်၊ ထမင်းပေါင်းအိုးတည်၊ ရေခဲသေတ္တာထဲက နွားနို့ဘူးကိုထုတ် အိုးထဲထည့်ကာ နွှေး၊ ရေချိုးခန်းထဲက ရေပူစက်ကိုဖွင့် မနားတမ်းလုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ မီးဖိုချောင်ကြမ်းပြင်က ကြွေပြားတွေကိုလည်း သေချာဆေးတာလည်း လုပ်တာပေါ့လေ။
ရေနွေးနွေးလေး စိမ်ပြီးချိုး၊ နွားနို့ပူပူလေးကို ပေါင်မုန့်မီးကင်နှင့် ဗိုက်ဖြည့်ပြီးနော် ဧည့်ခန်းက ဆိုဖာမှာလှဲလျောင်းလိုက်ကာ AXN Channel ကိုကြည့်မလို့လုပ်ပြီးမှ ခန္ဓာကိုယ်က သက်သောင့်သက်သာဖြစ်လာရမှုကြောင့် ငိုက်မျဉ်းစပြုလာပြီး အိပ်ဖို့ အချက်ပေး လာတယ်ထင်ပါရဲ့။
'ဟေး...ငါ့ကောင် ပြန်လာပြီလား၊ ၀ိုး...အလိုက်သိတယ်ကွာ ဗိုက်ဆာနေတာနဲ့အတော်ပဲ'
'မနေ့ညက ဇေဇေ့စော်က မိုက်တယ်ကွ သိလား?'
'တော်ပြီ ငါတမှေးမှ မအိပ်ရသေးဘူး နိုးမှပြောကွာ '
'အိုကေ အိုကေ ဆောရီး'
ပျော်ရွှင်ချင်တာ ပျော်နေရတာ ပျော်ဖို့ဆိုတာတွေက အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှရလာမဲ့အရာ တွေလား ကျွန်တော့်အတွက်လေ။ ထားလိုက် ပါတော့ အားလုံး....ဘ၀ဆိုတာ ဒီလို ရူးနှမ်းနေရုံနဲ့ပြီးတာမှမဟုတ်တာ...နက်ဖြန်များစွာကို မျှော်လင့်နိုင်သေးတာပဲ။
Alex Aung (June 12, 2010)
Posted by Alex Aung at 4:26 PM